Asehoy ny fitsambikinana - Noti Caballos | Soavaly Noti
Iray amin'ireo maoderina manaitaitra indrindra an'ny mitaingina soavaly dia fampisehoana mitsambikina. Iray amin'ireo fifehezana izay mahatonga antsika haniry hatrany ny tenantsika sy ny soavalintsika.
Ao amin'ny tontolon'ny asehoy ny mitsambikina misy sokajy samihafa, arakaraka ny taona na ny haavon'ilay nitaingina azy. Mahita karazana maromaro isika mitsambikina toy ny mitsangana, ambany na mitambatra ary ny tsirairay amin'izy ireo dia mizara safidy maro hafa.
Izany dia Safidy mpitaingin-tsoavaly tena mahalianaAmin'ity habaka ity dia ho hitanao ny zava-drehetra mifandraika amin'ilay lohahevitra. Toy ny torohevitra, fifaninanana ary na anecdotes aza. Izany rehetra izany mba hahafantarana ny tontolon'ny seho mitsambikina kely kokoa.
Tsiambaratelo amin'ny fanampiana soavaly mitsambikina
ny danigraffi hace 9 taona .
Rehefa mampianatra soavaly hitsambikina isika dia mila mampiasa fitaovana marobe mba hahafantaran'ilay biby ny atao hoe ...